Sheekada filimka 1921: Zareen Khan bandhigeedii ugu wacnaa ayay la timid filimkan kala dhiman | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka 1921: Zareen Khan bandhigeedii ugu wacnaa ayay la timid filimkan kala dhiman
Sheekada filimka 1921: Zareen Khan bandhigeedii ugu wacnaa ayay la timid filimkan kala dhiman
Director Vikram Bhatt wuxuu la yimid filimka cabsida badan 1921 markaana Zareen Khan ayuu laso shirtagay s ay filimkiisa u gado, madaama gabadhaan dhawaanahan u weecatay sameynta aflaanta qayaanada iyo dareenka isku jiro sameyntooda.
Jilaayaasha: Karan Kundra, Zareen Khan
Qiimeynta Sheekada: 2/5
Muxuu Ku Wanaagsan 1921: Wuxuu leeyahay muuqaal cabsi si wanaagsan loo sameeyay iyo mararka qaar uu Vikram Bhatt sheekada ka dhigaayo mid xiiso badan intaasna waxaa u dheer bandhiga heerka sare Zareen Khan sameesay.
Muxuu Ku Liitaa 1921: Kuma duwan aflaantii cabsida ee Vikram Bhatt sameyn jiray, weliba muuqaalada ama dhacdooyinka qaar waa kuwa soo noq noqonaayo xiisahana ka qaadeen filimkaan.
Daawo Ama Ha Daawanin: 1921 ma ahan fariin adag waxaa ku jiraan heeso badan oo aan loo baahneyn, hadii aad firaaqo leedaha Zareen Khan bandhigeeda wacan bal qiimeyn ku samee!
Fariinta Filimka 1921 Oo Kooban: Ayush Asthana( Karan Kundra) waa wiil leh si dabiici ah u leh xirfada muusiga iyo heesaha balse aan waligiis tababar u galin.
Wiilkan xirfadiisa dhanka muusigada waxaa la dhacaayo aabihiis Mr Wadia ( Vikram Bhatt) xili u xaflad reerka qabaan wacdaro ka dhigaayo wuxuuna aabihiis kula talinaa inuu muusiga barto oo uu xirfad toos ah ka dhigto.
Mr Wadia ( Vikram Bhatt) wiilkiisa wuxuu la galaa heshiis ah inuu New York u diro halkaas muusigada kasoo barto sidoo kalena guri weyn oo uu halkaas ku leeyahay ilaaliyo.
Ayush Asthana( Karan Kundra) dalabka aabihis wu aqbalaa wuxuuna soo aadaa New York balse sedex bilood kadib waaya aragnimo xanuun badan cabsina u dheer tahay ayuu halkaas ku arkaa.
Dhinaca kale Rose ( Zareen Khan) waxay hawada ka jeclaatay kuna waalan tahay Ayush Asthana( Karan Kundra) muusigada iyo heesihiisa waxayna leedahay awood ay ku ogaan karto waxyaabaha naga qarsoon.
Rose (Zareen Khan) dadka ayay caawisaa waxayna leedahay awood ay ruuxaanta kula hadasho sidaa darteed marka ay Ayush Asthana( Karan Kundra) la kulanto noloshiisa halis badan oo soo wajaheyso ayay ka bad baadinee isagana jaceyl dhab ayuu u qaadaa.
Rose (Zareen Khan) waxay rabtaa inay Ayush Asthana( Karan Kundra) ka bad baadiso ina adeerkiis oo rabo inuu dilo sidoo kalena la wareego guriga weyn ee aabihiis magaalada New York ku leeyahay.
Maxaa laga dhahay fariinta filimka 1921: Waa wax lala yaabayo inuu filimkan sameeyay Vikram Bhatt oo looga haray sameynta aflaanta cabsida badan waayo 1921 sheekadiisa waa mid lagu jah wareeriyo oo aan la fahmi karin qaabka loo dhigay.
Waxaa wanagsan in sheekadiisa la adkeeyo waqti ahaana lasoo koobo filimkaan si uu mid heer sare ah u noqdo waxaa intaas u dheer heeso badan oo aan loo bahneyn inay ku jiraan.
Bandhiga Jilaayaasha: Zareen Khan waxay la timid bandhigeedii ugu wanaagsanaa ebid waxaana la dhihi karaa atirishadan waaya arag ayay noqotay si wacana wey kaga baxsatay doorkeeda, waa hubaal in Zareen filimkaan bandhig ahaan aqoonsi dheeraad ah ku heli doonto.
Karan Kundra waa midka ugu liito filimkaan bandhig ahaan inkastoo aragtiisa badan tahay hadana door lagu wareerayo oo aan adkeyn ayuu ka qaatay filimkaan, weliba qaab jilinkiisa ma wanaagsan xirfadiisana ma sareyso waa inuu iska soo hagaajiyaa sida shaashada dadka loogu soo jiito waxaana wanaagsaneyd in atoore kale oo waaya arag ah doorkan loo dhiibo!
Laakiin qaybaha dambe Karan Kundra si fiican ayuu u jilay weliba si gaar ah marka uu jirkiisa dhex galo isbiiritka ama ruuxaanta rabto inay dhibaatada isaga u geesato markaas ayuu hurdada ka kacay saameyn yarna la yimid.
Gunaanad: 1921 waa filimka cabsida ugu liito ee uu Vikram Bhatt sameeyo isku xir ahaan sidaa darteed labo heer oo wanaagsan, bandhiga heerka sare Zareen Khan iyo qaybaha dambe oo xoogaa cabsi leh u daawo filimkan, weyna ku adkaan doontaa inuu daawadayaal badan soo jiito.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka 1921:
Waxaa Aqrisay 568